Qorshe ay dowladda federaalku maamul goboleed cusub uga dhiseyso Sool iyo Sanaag oo la shaaciyey – Hornafrik Media Network
Qorshe ay dowladda federaalku maamul goboleed cusub uga dhiseyso Sool iyo Sanaag oo la shaaciyey
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhismaha maamul goboleed cusub ka wada gobolada Sool iyo Sanaag, sida uu sheegay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID Eng. Feysal Cali Waraabe.
Guddoomiye Faysal, ayaa dowladda federaalka ku eedeyay inay ku howlan-tahay in maamulkaasi cusub ka dhisto gobolada Sool iyo Sanaag oo sida uu sheegay hoos taga Somaliland.
Faysal ayaa sheegay in qorshaha ay dowladda federaalka ku rabto in deegaanada goboladaasi ay maamul ugu sameyso ay hor kacayaan, isla markaana ay fulinayaan xubno ka tirsan xukuumadeeda iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobo-daareed.
Wuxuu sidoo kale uu sheegay guddoomiye Faysal in dhismaha maamulkaasi lagu dhisayo iyo qorshihiisaba ay xubnaha ku howlani ka wadaan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Hadalka Faysal ayaa waxa uu ku soo aadaya xili uu Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland, Cabdixakiin Dhoobo Daareed uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee Itoobiya, oo uu kula kulmeyna Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo uu kamid ahaa Safiirka Soomaaliya ee Itoobiya, Cabdixakiin Cameey.
Maamulkan cusub ee uu sheegay Faysal Cali ayaa waxa uu ka madax banaan doona maamuladda Somaliland iyo Puntland, oo iyagu inta badan uu ka dhaxeeyo dagaal xuduudeed baahsan oo dhowr jeerna soo noq-noqday.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad: “Waan ku qanacnay raali-gelintii CC Warsame”